Archive du 20-oct-2021
« Agents » an’ny ladoany leo kolikoly Nanao taratasy fitarainana sy ampamoaka goavana
Nandefa taratasy misokatra ho an’ny Sendikan’ny Fadintseranana Malagasy sy ny mpiara-miasa aminy ireo Fikambanan’ny “Agents”
Loza nahafaty an’i Kevin Yang Nidoboka am-ponja vonjimaika ilay ramatoa
Naiditra am-ponja vonjimaika ilay ramatoa 43 taona voasaringotra ho tompon'antoka tamin'ny lozam-piarak, nahafatesana an'ilay teratany sinoa vao 17 taona antsoina Kevin Yang,
Fitakiana sy grevy Nanitsy ny vavabe nataony ny praiminisitra
Nilefitra ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta Atoa Ntsay Christian omaly eo anatrehan’ny grevy samihafa miseho eto amin’ny firenena.
Trafika goavana teny Ivato Safira, Emeraude mitentina 2 miliara Ar no tratra
Sarona indray ny fikasana hanao trafikana harem-pirenena goavana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato omaly talata 19 oktobra.
Dama sy Bekoto Hampirevy Mahaleo ao Fianarantsoa
Mialohan’ny fankalazana ny faha 50 taonan’ny tarika Mahaleo dia niangavy ry zareo any Fianarantsoa hoe mba hasiana revy Mahaleo koa any mialohan’izay, hoy I Dama sy Bekoto,
Nosokafana ofisialy ny taom-pianarana “Hivoaka ny karaman’ny PAT eny amin’ny Oniversite”
Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy18 oktobra tao amin'ny Oniversite Andrainjato Fianarantsoa ny taom-pianarana 2021-2022 ho an'ny oniversite manerana Nosy.
Mpatory an-dalana etsy Anosy Zaza menavava 7 volana namoy ny ainy
Zazavavy kely iray tsy manan-tsiny zanaka mpatory an-dalana etsy Anosy no namoy ny ainy omaly atoandro tokony ho tamin’ny 10 ora tany ho any.
Fiainaa andavanandro Mampitandrina amin’ny resaka AVC ny mpitsabo
Maro ireo olona fantatra fa tratry ny aretin’ny fahatapahan’ny lalan-dra hita teny anivon’ny hopitalim-panjakana tato ho ato.
North and Center Hamoha ny lasa ao Antsirabe
Fampisehoana miisa 2 be izao no atolotry ny tarika mpanao Rap, North and Center, ao Antsirabe ny 27 oktobra izao.
Kaominina Andranonahoatra Itaosy Maika ny fijerena ireo lalan-kely isan-tanana
Mbola tsy milatsaka akory ny ranon’orana dia efa velom-panahiana sahady ireo mponina sasany ao anatin’ny kaominina Andranonahoatra, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.